रान्दोसेरु: के हो त यो ब्याग ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > रान्दोसेरु: के हो त यो ब्याग ?
हजुरले ट्रेन वा बाटोमा स्कुल पढ्ने भुरा भुरीले बोक्ने गरेको चारपाटे परेको बलियो देखिने ब्याग पक्कै देख्नु भएको होला। जापानी स्कुलमा सबै कुरा युनिफर्म हुन्छ। ब्याग नि सबैले तोकिएको बोक्छन। यो ब्यागलाई जापानीमा रान्दोसेरु भनिन्छ। बच्चा पहिलो चोटी स्कुल जान थाले पछि यो ब्याग उनीहरुलाई अब तिमीहरु पढ्ने बेला सुरु भयो भन्ने सम्झना सरि दिईन्छ। रान्दोसेरु जर्मन शब्द रान्सेल्बाता आएको हो। रंसेलको अर्थ ब्याग्प्याक हो। रान्दोसेरु बच्चाहरुको रोजाई अनुसार विभिन्न कलर र भेराईटीमा पाईन्छ। यो ब्याग बच्चाहरुले स्कुल जादा किताब कपि र स्कुल जादा चाहिने अन्य सामान बोक्न प्रयोग गर्छन।
भेराईटी र डिजाइन
एउटा टिपिकल रान्दोसेरु ३० हाईट, २३ वाइड, १८ मोटो हुन्छ। खालि हुदा एसको तौल १.२ केजी हुन्छ। पहिले यो नरम छालाको बनाईन्थ्यो। अहिले भने हलुङ्गो र बलियो ब्यागको माग बढेकोले धेरै जसो सिन्थेटिक लेदर “क्लारिनो” को प्रयोग गरेर बनाइन्छ। पहिले पहिले रान्दोसेरुको रंग पनि तोकिर्को हुन्थ्यो। केटाहरुले कालो र केटिहरुले रातो रंगको ब्याग बोक्दथे। पछि नया स्कुलहरुले अरु जुनसुकै खालको ब्याग बोक्दा हुने भनेपछि रान्दोसेरुको ब्यापार घटेको थियो। त्यहि बेला देखि रान्दोसेरु विभिन्न रंग र डिजाईनमा निक्लिन थालेको हो। अन्य रंगहरुमा पनि बनाउनुको अर्को कारण चाही रंगलाई लैंगिक सोच नदिनको लागि पनि थियो। नया ब्यागहरु पिङ्क, खईरो, हरियो, निलो, दुइ रंगीहरु थुप्रै डिजाईनमा निक्लिन थालेको हो।
रान्दोसेरु धेरै अगाडीबाट प्रयोगमा आएको हो। एदो युगमा पनि रान्दोसेरुको प्रयोग भएको देखिन्छ। पहिले यो ब्याग सैनिकहरुले बोक्ने गर्दथे। रान्सेल ब्याग जस्तै आकार हुने यो ब्याग कालान्तर मा रान्दोसेरु बन्न पुगेको हो।
बिद्यार्थीहरुले भने सन् १८८५ मा गाकुशिन बिद्यालय जानेले रान्दोसेरु प्रयोग गर्न थालेका हुन्। गाकुशिन स्कुल भनेको हाई क्लास स्कुल हो। यो स्कुलमा शाही परिवारका बिद्यार्थी धेरै हुन्थे। जापानीहरुले सैनिकलाई धेरै सम्मान गर्ने हुनाले, स्कुल जाने बिद्यार्थीलाई पनि त्यतिनै सम्मान दिन एस्तो डिजाईनको ब्याग बनेको मानिन्छ। त्यो बेला रान्दोसेरु ब्याग धनि व्यक्ति हरुले मात्र बोक्दथे।
अहिलेको स्कुलहरुमा रान्दोसेरुनै बोक्नु पर्ने पहिलेको जस्तो कडा नियम छैन। तर पनि सानो बच्चाहरुमा यो ब्याग निकै लोकप्रिय छ। त्यसको कारण यो ब्याग अहिले फेसन स्टेटमेन्टको रुपमा स्थापित भएकोले हो। अहिले त यो ब्याग थुप्रै रंगमा पाइन्छ नै, जापानमा लोकप्रिय मानिने क्यारेक्टर जस्तै हेलो किट्टीको प्रिन्टमा पनि पाईन्छ। जापानको आमाजोनको आमजोन चोइसमा ८००० यन देखि १५००० यन सम्म पर्ने रान्दोसेरु छन्। यी महंगा भने पक्कै होइनन। महगो र राम्रो खालको रान्दोसेरुको मूल्य ५०००० देखि १ लाख यन सम्म पर्न जान्छ।
Hello kitty randoseru